Ndị na-edebe ụlọ na B2B Tweeting | Martech Zone
Ndị azụmahịa ahụ na-azụ ahịa (B2B) folks abụghị mgbe niile n'elu akụkọ nyocha ahịa, mana oge ọ bụla ị ga-achọta mkpuru ahịa. Ọ bụ ezie na nke a kpọmkwem Infographic si Pauley Creative na-elekwasị anya na nyocha nke UK Architects, Ekwenyere m na nchọta ahụ nwere ike mepee ụlọ ọrụ B2B ndị ọzọ iji hụ ka onye na-ajụ ase ga-esi baa uru na nzukọ ha. Dabere na nsonaazụ nyocha ahụ, ọtụtụ ndị na-ese ụkpụrụ ụlọ na-eji Twitter iji soro akụkọ ụlọ ọrụ kachasị ọhụrụ na netwọkụ na ndị ọgbọ ụlọ ọrụ.
Banyere Pauley Creative:
Dị ka ha website, Pauley Creative bụ ọkachamara na ahịa dijitalụ maka ụlọ ọrụ ihe owuwu. Anyị nwere ahụmịhe n'ịzụlite usoro ịzụ ahịa dijitalụ dị elu na nke nwere atụ maka ndị ahịa anyị nke na -emepụta ụdị mmata na ịchụ ahịa azụmaahịa maka ụlọ ọrụ metụtara ụlọ.